Cabsji ka jirta Miisaaniyad la’aanta DF ee sanadka 2019-ka & is qab-qabsi ka taagan meelmarintiisa | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Cabsji ka jirta Miisaaniyad la’aanta DF ee sanadka 2019-ka & is qab-qabsi...
Cabsji ka jirta Miisaaniyad la’aanta DF ee sanadka 2019-ka & is qab-qabsi ka taagan meelmarintiisa
Is qabqabsiga ka jira shaqada Guddiga Maaliyadda, Xukuumadda iyo Guddoonka Golaha Shacabka ayaa ugu weyn hakadka ku jira fadhiyada Baarlamaanka oo tan iyo markii muran uu dhaliyay kala diridii Guddiga Maaliyadda ee Guddoomiye kuxigeenka ay kulamada baarlamaanka noqdeen mid xirma, sababo ku aadan muranka ka dhashay kala dirida iyo warbixintii Guddiga musuq maasuqa miisaaniyadda sanadka 2018.
Warbixinta Guddiga Maaliyadda ee ka hadleysay musuq maasuqa iyo wax is daba marinta lagu sameeyay Miisaaniyadda sanadka 2018 ayaa ka mid noqday caqabadaha ugu weyn ee Xukuumadda kala kulantay Guddiga, iyadoo wixii markaas ka dambeeyay Xukuumadda culeys badan saartay Guddiga si loo kala diro.
Inkastoo howlihii Baarlamaanka iyo fadhiyadiisa ay sii cakirmeen tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Guddoomiye Maxamed Mursal uu aqbalay mooshinkii xil ka qaadista ee Madaxweynaha laga keenay 9-kii bishan, hadana weli xasillooni la’aan ayaa ka dhex jirta Baarlamaanka.
Shaqada Guddiga Maaliyadda iyo Miisaaniyadda Golaha Shacabka ayaa muhiim u tahay howlaha iyo socodsiinta Miisaaniyadda sanadka 2019, isla markaana Guddiga uu u soo gudbiyo baarlamaanka, si uu dood uga yeesho, isla markaana ugu dambeyn cod u qaado.
Laakiin inta Guddiga qudhiisa kala qeybsan yahay, oo aanay howshiisa kala caddeyn waa adkaan doontaa in sanadka cusub ee dhalanaya in dalka miisaaniyad yeesho, maadaama Guddigaba isla socon, shaqadii loo igmaday ay halis ku jirto.
Xukuumadda waxay olole ugu jirtaa in gebi ahaanba meesha laga saaro Guddigan iyo xubnihiisa u badan mucaaradka oo ay u aragto inuu toosh ku shiday, wax badan oo miisaaniyadda ka qaldanaa banaanka u soo saaray.
Sidoo kale xubno ka mid ah Guddiga Maaliyadda ayaa u muuqda kuwo u shaqeynaya Koox ka tirsan Xukuumadda oo kale, kala dhantaalaya shaqadooda iyo waajibaadka ay Guddiga ku lahaayeen.
Xildhibaan C/risaaq Dheere oo ka tirsan Guddiga ayaa sheegay in faragelinta Xukuumadda iyo Madaxtooyada ku heyso Guddiga Maaliyadda ay adag tahay in Guddiga shaqeeyo.
“Ma badna rajada ah in uu sii wada shaqeeyo Guddiga Maaliyadda, Dhowr shir ayaan la yeelanay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, waxaana noo soo baxday Guddi Madax Banaan in uusan meesha ka jirin” ayuu Xildhibaan C/risaaq Dheere.
Waxaa uu sheegay in dhalinyaro taageersan Xukuumadda oo ka mid ah Guddiga ay ka shaqeynayaan inuu Guddiga burburo, isagoo xusay inay iyagana qaateen go’aan ah in aysan u dulqaadan karin in faragelin lagu sameeyo shaqada Guddiga oo Xukuumadda uga imaaneysa.
“Xukuumaddu ha ogolato in Guddigu shaqeeyo, haddii ay diiddana, Golaha Shacabka iyada ayuu u xiran yahay, furayaashana iyadaa horay u qaatay oo haysta”ayuu yiri Xildhibaanka oo intaa ku daray in Xukumaddu qaadan la’dahay sida uu Guddigu u soo saaray War-bixintii Miisaaniyadda 2018-ka.
is qabqabsiga iyo khilaafka ka taagan sharciyadda Guddiga Maaliyadda inuu sii shaqeeyo iyo in kale waxay noqon kartaa caqabad kale oo aan la fileyn halka ay ku biyo shuban doonto, waxaana haddii arrintan sii daba dheeraado oo aanu Baarlamaanka maalmaha soo socda shirarkiisa caadiga dib u bilaaban waxay noqon doontaa in iyadoo aan la ansixin Miisaaniyadda sanadka 2019 inuu sanadka dhasho maalmaha soo socda, dalkuna uu miisaaniyad la’aan galo.